Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia Oganda » Nosamborina! Voasambotra ireo mpamono liona Ogandà
Voasambotra ireo mpamono liona Ogandà
Ny Oganda Wildlife Authority (UWA) dia nisambotra ireo olon-dratsy nanapoizina sy nanaparitaka liona enina tao Ishasha tao amin'ny Queen Elizabeth National Park.
Ny fatin'ireo liona tapaka dia hita tao Ishasha ny zoma 19 martsa hariva lasa teo, ary nanjary natao famotorana.
Fiaraha-miasa niarahan'ny UWA, ny hery fiarovan'ny vahoaka Uganda ary ny polisy.
Nentin'ireo olon-dratsy ny ekipa mpiambina tany amin'ny toerana nahitana ny lohan'ny liona niafina tao anaty hazo ary ny iray fahefatra dia nalevina 15 tongotra tao ambanin'io hazo io ihany.
Ny talen'ny serasera ao amin'ny UWA, Hangi Bashir, dia nanamafy fa ireo mpamono liona 4 Ogandà dia voasambotra noho ny fahafatesan'ireo biby tao amin'ilay toerana fizahan-tany malaza.
Anisan'izany i Ampurira Brian, 26 taona; Tumuhirwe Vincent, 49 taona; Aliyo Robert, 40 taona; ary Miliango Davi, 68. Nosamborina omaly alina izy ireo tao amin'ny Village Kyenyabutongo, Paroasy Rusoroza, fari-piadidian'i Kihihi, Distrikan'i Kanungu, nandritra ny hetsika niarahan'ny UWA, UPDF (Hery Fiarovana ny Olona Oganda), ary ny Polisy.
Araka ny filazan'i Hangi: "Andro vao maraina ny andro, dia nentin'ireo olon-dratsy ny ekipa mpiambina tany amin'ny toerana nahitana ny lohan'ny liona niafina tao anaty hazo ary ny iray fahefatra dia nalevina 15 tongotra teo ambanin'io hazo io ihany. Nilaza ireo olon-dratsy fa nilatsaka ny tongony iray tao amin'ilay valan-javaboary.
"Tavoahangy telo misy akora simika iray fantatra amin'ny anarana hoe Furadan sy jerrycan 2-litatra misy menaky ny liona no azo tao amin'ny toeram-pambolena akondro. Lefona roa, panga iray (machete) iray ary harato fihazana iray no hita nafenina tao anaty zaridaina tao an-tranon'i Tumuhirwe Vincent.
"Ny fatin'ireo liona dia hita tao Ishasha ny harivan'ny zoma 19 martsa 2021, ary nanao fanadihadiana momba izany ny UWA."
Ny alatsinainy hariva teo dia nahazo fampahalalana marim-pototra momba ny olona ahiahiana ho ao ambadiky ny UWA mamono ny liona, ary manao zavatra mitovy amin'izany, hetsika niarahan'ny UPDF, ny Polisy ary ny UWA no natao ka nosamborina ireo olona 4 voarohirohy.
Hatolotra ny fitsarana any amin'ny fitsarana ireo voarohirohy ireo, hoy i Hangi, ary nanampy hoe: “Midera ireo maso ivoho misahana ny fiarovana izahay izay nanatevin-daharana ny asa aman-draharaha mba hihaza ny olona ao ambadiky ny fahafatesan'ny liona sy ny mpitarika ny distrikan'i Kanungu noho ny fanampiana natolotra an'ireo ekipa fiarovana. Manome toky ny besinimaro izahay fa hanohy hanamafy ny fiarovana ny liona sy ny bibidia hafa ao Oganda ary hanenjika an'ity raharaha ity mandra-pitsarana ny liona maty. Ireo zaridainam-pirenentsika dia mijanona ho azo antoka sy manintona ny mpitsidika, ary mbola manana liona ihany isika Queen Elizabeth sy ny valan-javaboary hafa. ”
WestJet dia mamerina amin'ny laoniny ireo zotram-paritra naato noho ny COVID-19